Rohingya: Alert on Malaysia gun violence incident | မူဝါဒ ဆွေးနွေးခန်း
1. Firstly, there will be intensense speculation about the identity of attackers; all fingers will be pointing to the Rohingyas and Muslim-extremists in Malaysia. Let me assure you, there are stereotyping of 'all Muslims' as violent-prone extremists that has been throughout the world already and, most importantly, now in Burma.
2. Secondly, this kind of attack will lend unprecendented credentials towards nationalistic RNDP leaders like Dr. Aye Maung as 'patriotic', 'national hero' and is 'most worthy' of his leadership. It is very fortunate that those inside the car were unhurt. Otherwise, if anyone dies, he/they will become eternal 'patriotic heroes' to the masses of which no one will ever haveamean to counterbalance their influence.
3. Thirdly, the RNDP/Rakhine Nationalists are known to have exploited the events like the murder of Ma Thida Htway. These Rakhine Nationalists will not hesitate to exploit this Malaysian incident, of which they will be seeing as their political fortune to mobilize the masses.
4. Lastly, unless these culprits are quickly found in Malaysia, the responsibility for this incident will remained on the head of Rohingyas in Malaysia. Then the Rohingyas in Arakan will have to bear the brunt of public anger regardless of the truth about who have done this deed.
In views of mere politics, this kind of violent attack is most un-timely, stupid and, like 9/11 incident of USA, just lendingagood hand to racist extremists ( check my old blogs about war in Iraq). I dare say.
The RFA article linkup in here:
(Original text in part)
မလေးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို လူတစ်စုက အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအေးသာအောင်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညက အမည်မသိ အကြမ်းဖက် သမားတစ်စုက သေနတ် နဲ့ လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြရာမှာ၊ သူတို့စီးလာတဲ့ကားကို ထိမှန်ပြီး၊ လူတွေတော့ လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့RFA က စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ဦးအေးသာအောင်တို့နဲ့အတူ ကားထဲမှာ လိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ မလေးရှားရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစိုးအောင်က RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ နှစ်ယောက်က ကားဘေးကနေ ကပ်လိုက်လာပြီးတော့ ပစ်တာပေါ့၊ ကျနော်တို့ ပစ်တယ်လို့ သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့က ကားကိုလွတ်အောင် မောင်း တာပေါ့ဗျာ၊ မောင်းတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က နောက်ကထပ်လိုက်တာပေ့ါဗျာ၊ နောက်ပြီးတော့ ဘေးကို တစ်ချက်ပစ်တယ်၊ နောက်ကနေထပ် နှစ်ချက်ပစ်တာပေါ့၊ သုံးချက်ပေါ့၊ ကားထဲမှာ ကျည်ဆန် သုံးခုတွေ့တာပေါ့၊ ပစ်တဲ့အချိန်မှာ ကြားလိုက်တာက ပစ် ထပ်ပစ် ထပ်ပစ်ဆိုပြီးတော့လို့ ပြောတာ ကြားလိုက်တယ်”
သေနတ်သမားတွေက သူတို့ကားနောက်ကနေ လိုက်လံပစ်ခတ်ချိန်မှာ မြန်မာစကားနဲ့ ပြောဆိုသံကြားခဲ့ရတဲ့ အတွက် အဲဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးစိုးအောင်က ဆိုပါတယ်။
ဦးအေးသာအောင်နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ ဟာ မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတိုက်ခိုက်မှုမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရခဲ့ကြောင်း၊ ဒီဖြစ်ရပ်ကို မလေးရှားရဲဌာနမှာ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ သေနတ်သမားတွေကို ရှာလို့မတွေ့ သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ဦးစိုးအောင်ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။